धितोपत्र दलाल अनुमति - Karobar National Economic Daily
धितोपत्र दलाल अनुमति
query_builderJanuary 1, 2017 10:16 AM supervisor_accountज्योति दाहाल visibility1679
धितोपत्र दलाल अनुमति बैंकलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज तीव्र बनिरहेको छ । किन भनेर प्रश्न गर्दा निरुत्तर हुन्छन् अनि कनिकुथी प्रतिस्पर्धाका लागि भन्दै पन्छिन्छन् । ५० वटा दलाल छन्, कसरी प्रतिस्पर्धा भएन भन्यो भने कुतर्क गर्दै कुन दलालले कति पैसाको बिटोले हान्यो, कुन दलाल नातेदार पर्छ भन्दै अति निम्न शब्दको राम्रो उपयोग गर्छन् ।
यसो हुनुको कारण विषयको सैद्धान्तिक पक्ष र प्रचलित कानुनसम्बन्धी ज्ञानको अभाव हो । छिट्टै धनी हुने लालसाले आँखा चिम्लेर सेयरमा पैसा हाल्दा घाटाले उठीबास लाग्ने स्थितिमा पुगेपछि ‘के निहुँ पाऊँ कनिका बुक्याऊँ’ भनेजस्तै दलालप्रतिको आक्रोश मात्र हो ।
कम्पनीको प्रतिफल दिन सक्ने क्षमताको आकलन नगरी पैसा हाल्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म दलाल अनुमति जसलाई दिए पनि केही हुन्न । दलालले गर्दा सेयरको मूल्य घटेको अरण्यरोदन गर्दै बैंकलाई दलाल अनुमति देऊ भन्दै अर्को अरण्यरोदन गर्नु औचित्यहीन देखिन्छ । दलाल जो भए पनि किन्ने सेयर हो ।
पात्र र प्रवृत्ति एकै हो । फेर्नुपर्ने पात्र होइन, प्रवृत्ति हो । पात्रको प्रवृत्ति उही रहेसम्म बैंक, बिमा वा विमान कम्पनी जसलाई दलाल अनुमति दिए पनि केही हुन्न । बिरालो कालो वा सेतो जुन भए पनि हुन्छ, त्यसले मुसा मार्न सक्नुपर्छ । बजारको बढ्दो आकारसँगै दलालको संख्या थपिनुपर्नेमा कोही असहमत छैनन् ।
आवश्यक भएमा जति पनि दलाल थपिन सक्ने तथ्य पछिल्लो पटक थपिएका ३३ वटा दलाल संख्याले पुष्टि गरिरहेको छ । साविकमा २३ वटा हुँदा पनि प्रतिस्पर्धा भएन भनिएको थियो । अहिले ५० वटा हुँदा पनि त्यही भनिएको छ । प्रतिस्पर्धा केमा भएन ? दलाल शुल्क कि सेवा–सुविधामा ? शुल्कमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम मूल्य हद नतोकिएकाले प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति छैन ।
सेवा–सुविधाको हकमा अनुसूचीमा तोकिएबमोजिम नभए, दलालले अवाञ्छित कार्य गरे बोर्डमा उजुरी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । अमुकलाई दलाल देऊ भन्नुभन्दा अधिकतम शुल्क हद तोकेर प्रतिस्पर्धी बनाऊ, दलाललाई अन्यत्र पनि अनिवार्य कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न आदेश देऊ भन्न सकिन्छ ।
दलालसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा ‘दलालले ग्राहकको आदेशअनुसार ग्राहकको नामबाट मात्र धितोपत्र खरिद वा बिक्री गरी धितोपत्र दलाली सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ’ भनेर कामका बारेमा व्यवस्था गरेको छ ।
यसबाहेक बोर्डले आवश्यक व्यवस्था तथा सर्त तोकी दलाललाई ‘बजार निर्माता वा धितोपत्र व्यापारी’ को अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । अन्यथा दलालले धितोपत्र दलालीबाहेक अन्य कार्य गर्न सक्दैनन् । उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप गर्नुपर्ने दलालको संख्या निश्चित गरेपछि सम्भव भएसम्म वस्तुगत आधारमा योग्य दलाल छनोट गरेर त्यसमा २५ प्रतिशत थपेर नेप्सेले बोर्डमा सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेप्सेले छनोट गरी सिफारिश भएका दलालले बोर्डले तोकेका सर्त बन्देजको पालना गरी दलाली अनुमतिका लागि निवेदन गर्नुपर्ने र तोकिएका सर्त पूरा गर्नेलाई दलाल अनुमति दिने व्यवस्था छ । दलाल कम्पनीमा कम्तीमा दुई जना प्राकृतिक व्यक्ति सेयरधनी हुनुपर्छ ।
दलाल अनुमति कसलाई ?
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ६३ मा धितोपत्र व्यवसायको किसिमअन्तर्गत धितोपत्र दलाली र अन्य तोकिएबमोजिमको सेवा हुने बताएको छ । ऐनमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैंक वा वित्तीय संस्थाले समेत सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र व्यवसाय गर्न सक्ने देखिन्छ ।
धितोपत्र व्यवसायको किसिमभित्र दलाली परेको भए पनि बैंकले दलाली सेवाको अनुमति पाउन सक्ने भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन । नियमावलीअनुसार कम्तीमा दुई जना प्राकृतिक व्यक्ति सेयरधनी रहेको संगठित संस्था मात्र दलाल हुन योग्य हुन सक्छन् । बैंक कानुनले परिकल्पना गरेको कानुनी व्यक्ति हो र कानुनी व्यक्ति दलाल अनुमतिपत्र पाउन योग्य हुन सक्दैन ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ४७ मा मर्चेन्ट बैंकिङबाहेक अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकमा ‘स्वतन्त्रताको हक’ अन्तर्गत ‘नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगारी गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको’ प्रत्याभूति गरेको छ ।
त्यस्तै ‘सम्पत्तिको हक’ अन्तर्गत ‘प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भनेर व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाहरू प्राकृतिक व्यक्तिका लागि गरिएको हो ।
प्राकृतिक व्यक्तिका लागि गरिएको व्यवस्था कानुनी व्यक्तिलाई गरिएको हो भन्ने व्याख्या गर्न सकिन्न । प्राकृतिक व्यक्तिका लागि गरिएको व्यवस्था कानुनले परिकल्पना गरेको अमूर्त कानुनी व्यक्तिलाई सुम्पिने सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्न ।
धितोपत्र दलाली पनि व्यवसायको एउटा प्रकार हो । संविधानले नै नागरिकलाई व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ र नागरिकले प्रचलित संविधान र कानुनविपरित नहुने गरी व्यवसाय गर्न सक्छन् । व्यवसायको एउटा प्रकार बनिसकेको र कानुनले नै व्यवस्थित गरेको धितोपत्र दलाली गर्ने अनुमति पाउने अधिकार प्राकृतिक व्यक्ति सेयरधनी रहेको कम्पनीलाई मात्र देखिन्छ ।
२०६४ सालमा ३३ वटा दलाल थप गरी दलाल संख्या ५० कायम गर्न नेप्सेले सूचना प्रकाशन गरेपछि ‘देशले खुला बजार र उदार अर्थनीति अपनाएकाले संख्या सीमित गर्ने गरी दलाल संख्या तोक्न नमिल्ने’ र ‘संगठित संस्थाबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिलाई पनि दलाल अनुमति दिनुपर्ने’ जिकिर गर्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले नियमन निकाय र नियमन हुने व्यवसायको विषयमा गरेको व्याख्या अहिले पनि सान्दर्भिक छ ।
अदालतले व्याख्या गर्दै भनेको छ ‘...अर्कातर्फ धितोपत्र दलालको व्यवसाय लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण तथा नियमनकारी छाताभित्र रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवसाय भएकाले ‘तरकारी वा फलफूलको किनबेच गर्ने व्यवसायजस्तो साइकल वा ठेलागाडाको प्रयोग गरी जो–कोहीले जुनसुकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवसाय होइन’ भन्ने कुरा धितोपत्र ऐन, २०६३ को व्यवस्थाले पुष्टि गरेको छ ।’
‘...... उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बजार उपलब्ध गराउने नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडले निर्णय गर्ने विषय भएकाले धितोपत्र दलालको संख्या तोक्ने सीमित गर्ने गरिएको निर्णय वा कारबाहीको कुरा न्यायिक निरुपणको विषय हुन सक्दैन ।’
‘...खुला आर्थिक नीतिको अर्थ छाडा वा अव्यवस्थित र अनियमित गतिविधिलाई बढावा दिने वा छाडातन्त्रलाई मान्यता दिने होइन ।’
‘...प्रचलित कानुनद्वारा नियमित गराइएका व्यवसायजस्तो कानुन व्यवसाय, बिमा व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय व्यवसायलगायत कानुनअनुसार नियमित गरिएका व्यवसायहरू जस्तै धितोपत्र दलालको व्यवसाय जो–कोहीले पनि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवसाय होइन ।’
प्रचलित संविधान, कानुन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायिक व्याख्यासमेतका आधारमा दलाल अनुमति प्राकृतिक व्यक्ति सेयरधनी रहेको कम्पनीले मात्र पाउन सक्छ । अदालतले न्यायिक व्याख्या गर्दा धितोपत्र व्यवसाय जसलाई पायो उसलाई दिन नसकिने भनेर प्रस्ट पारेको अवस्थामा बैंकलाई दलाली अनुमति देऊ भन्दै अरण्यरोदन गर्नु बेकार छ ।
लगानीकर्ताहरूले अरण्यरोदन गर्न छाडेर पुँजीबजार विकास, विस्तार र सुधार गर्न बोर्डलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
(लेखक अधिवक्ता, सेयर विश्लेषक एवम् लगानीकर्ता हुन् ।)
बैंक धितोपत्र दलाल अनुमति